KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Gaandi “Kama yeelayno Xasan Sheekh” - Kismaayo Darood baa iska leh!? - Warbixin
Thursday 3 January 2013 09:28
Gaandi “Kama yeelayno Xasan Sheekh” - Kismaayo Darood baa iska leh!? - Warbixin
Muqdisho (KON) - Maxamed Cabdi Gaandi oo waday howlo la doonayay in Maamul loogu sameeyo Gobaladaasi ayaa wuxuu si cad u sheegay in Dowlada ay ka soo horjeedo Dadka Gobaladaasi in ay Maamul yeeshaan.
Maxamed Cabdi Gaandi ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo horjeestay in dadka gobaladaan ay yeeshaan Maamul Madax banana oo ay soo dhisteen.
Wuxuu sheegay in dowlada Soomaaliya ay haatan tahay mid federal ah, Dastuurkana uu qorayo wixii ka badan labo gobal in ay samaysan karaan Maamul Gobaleed hoostaga dowlada, taasina uu haatan ka soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya.
Gaandi ayaa sheegay in Madaxweynaha uu doonayo in uu asgu wax walba maamulo isla markaana dadka Jubooyinka uu u soo sameeyo maamul taasina ay tahay mid aanan la aqbali Karin.
“Waxa uu wado Xasan ma ahan wax soconaya anaguna aan qaadan karno, waxayna arintaan keeni kartaa in dadka gobaladaan ay qaadaan fakir qaldan, oo ay dowladii u arkaan in ay ka soo horjeedo” Sidaasi waxaa yiri Gaandi.
Qorshaha dadka Jubooyinka.
Maxamed Cabdi ayaa sheegay in arintu saan hadii ay u sii socoto, Madaxweynaha Soomaaliya uu ku adkeesto in uu go’aan ka gaarayo arimaha Jubooyinka inaysan yeeli doonin, waana in u ogaadaa in Kismaayo tahay Magaalo Daarood. Gaandi dhawr jeer buu ku celceliyey Darood, Darood sida Qof dhiilo ka guxayso.
Wuxuu sheegay in ay tashan doonaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobalada Jubooyinka isla markaana ay ka fikiri doonaan wixii dan u ah, maadaama uu yiri dowladu ay ka talaabsanayso dastuurkii u yaalay.
“Hadii Xasan Sheekh uu doonayo in uu soo magacaabo Maamulka Magaalada Kismaayo, gudoomiyana u magacaabo Magaalada Hargeysa iyo waliba Garowe” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Prof. Gandi.
Maamul u samaynta Jubooyinka.
Dowlada Soomaaliya ayaa doonaysa in Maamul rasmi ah loo sameeyo gobalada Jubooyinka kaasi oo noqonaya midka ay doonayaan shacabka ka soo jeeda gobaladaasi sida ay sheegtay dowlada.
Dhowaan ayay ahayd markii wafdi ka socda dowlada oo heer wasiir ah ay tageen magaaladaasi Kismaayo isla markaana dadka deegaanka iyo maamulka Axmed Madoobe ay kala soo hadleen maamul u samaynta Jubooyinka. Waxaana Madaxda dowladu ay cadeeyeen in maamulka uu noqonayo mid ka dhex imaanaya Bulshada Jubooyinka.